China bamboo ibrashi yamazinyo borashi mveliso kunye nabenzi | Enyuan
Ibrashi yamalahle yoqalo ithiywe emva kokongezwa kwelahleko yoqalo. Umbala wahlukile kwibhrashi yamazinyo yemveli. Kuba ii-bristles zongezwa nge-bamboo charcoal C ions ezikhutshiweyo ezikhutshwe kwimbumba yamalahle, umbala omnyama ngokwendalo. Le biotechnology yamkelwe. Isetyenziswa njengebrashi yamazinyo yokucinezela ukuphefumla kunye nezinye iingxaki zomlomo.
Igama lemveliso bamboo wamalahle ibhrashi yamazinyo
Izinto zeBristle bamboo amalahle intambo
Izinto zokubamba ibrashi iphe + tpr
I-0.18mm iinwele ezicekethekileyo ezicekethekileyo
Intloko yebrashi ekhethwe ngononophelo, enemicu emifutshane, icoca umsantsa ophakathi kwamazinyo, ngalo mhlaba ugobileyo wahlukile, uzisa amava amatsha okucoca amazinyo
Amasuntswana omdaka omdaka
I-bamboo charcoal ekumgangatho ophezulu icutshungulwa yenziwa umgubo ocolekileyo, onamandla okukhangela iintengiso kwaye unokufunxa iintsalela zokutya kunye nevumba. Unokwenza i-bristles yome ngokukhawuleza, ihlale icocekile, ikhuselekile kwaye icocekile
Umbala wahlukile kwibhrashi yamazinyo yemveli. Kuba ii-bristles zongezwa nge-bamboo charcoal C ion ion ekhutshwe kwilahle yoqalo, umbala ngowomnyama wendalo, owahlukileyo kwaye ugcwele ubuntu.
I-bamboo charcoal C iyasebenza kwinqanaba leadayimani elinamandla amakhulu e-C ngobume benethiwekhi obukhutshwe kwilahle yoqalo phantsi kobushushu obuphezulu kunye noxinzelelo oluphezulu, kunye nokusebenzisa itekhnoloji ye-high-tech ukudibanisa amalahle omthi we-C asebenzayo kunye ne-bristles ukuvelisa i-adsorption ephezulu, ukufuma ukumelana, ulawulo lokufuma kunye namandla e-Antibacterial, inokukhulula imitha ye-infrared kude kunye nee-oksijini ezimbi. Yaziwa ngokuba ngumgcini wezempilo wenkulungwane yama-21. Isetyenziswa ngokubanzi kwiindawo ezininzi kubomi babantu bemihla ngemihla.
Ububanzi obuphezulu bee-bristles zi-0.18mm, 8, ezinokucoca ngokugqibeleleyo i-gingival crevicular kunye namalungu wamazinyo angafikeleliyo kwibrashi yamazinyo yesiqhelo, susa ngobunono isibalo samazinyo kunye nocwecwe lwamazinyo, phucula amandla okucoca iibrashi zamazinyo, ukunciphisa izinga leziganeko ye-periodontitis, kwaye ungonzakalisi imiphezulu yamazinyo, ukukhusela impilo kunye nococeko lwamazinyo.
Inkqubo yokuxukuxa amazinyo ikwayinkqubo yokuthambisa ngobunono iintsini kunye nomphezulu webristles encinci. Xa kuthelekiswa nebrashi yamazinyo yesiqhelo, ibrashi yamalahle yamalahle inganciphisa uxinzelelo kwi-gingiva kwaye inciphise imeko yobubomvu be-gingival kunye nokudumba.
Egqithileyo i-oem ithambile ibrashi encinci yebhrashi yentloko
Okulandelayo: Amalahle omoya ibhrashi yamazinyo elwa nendlu
Antibacterial ibhrashi yamazinyo Bristles
Iibhulashi zamazinyo ze-Antibacterial
I-Bamboo Charcoal Antibacterial Ibrashi yamazinyo
I-bamboo Ibrashi yamazinyo yokubulala iintsholongwane